प्रश्न A320 मेगा प्याकेज, नयाँ मोडेल?
4 महिना2सप्ताह पहिले -4महिना2सप्ताह पहिले #1359 by Salyut_
के शर्टलेट मोडेल कहिल्यै प्याकेजमा थपिनेछ? त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ।
अन्तिम सम्पादन:4महिना2हप्ता पहिले Salyut_.